Ny lalao tsara indrindra hilalao ao amin'ny Zoom miaraka amin'ny ankohonanao sy ny namanao 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Amin'ity vanim-potoana fisarahana lavitra noho ny Covid-19 isika rehetra dia mampiasa ny teknolojia natao mba hanaovana videoconferansa sy fivoriana an-tserasera, toa ny FocusNa izany aza, ny antso an-dahatsary dia mety ho lasa fotoana iray hifalifaliana ihany koa, handaminana ny lalao lalao an-tserasera amin'ireo namana sy fianakaviana.
Ka eto izahay dia manolotra anao safidy lalao tsotra be hilalao. Focus (na amin'ny Fihaonana na app antso an-tsary hafa), tsy misintona rindrambaiko na rindranasa, fa amin'ny alàlan'ny fifandraisana fotsiny amin'ny namana sy fianakaviana, amin'ny fampiasana fampiasa maimaimpoana vitsivitsy izay omen'ny sehatra ary hamelana toerana ho an'ny fahaizanao mamorona sy ny eritreritrao, hanome anao ora maro fitsaharana sy fihomehezana. Mamaly nefa tsy mifandona ary ataovy mahafinaritra kokoa ny zava-drehetra, ny torohevitra dia ny hisafidianana vitsivitsy feo famantarana mihetsika toy ny botones.
VAKIO IHANY: Ny lalao multiplayer tsara indrindra
Amin'ny fotoana ahafahanao mizara famelabelarana avy amin'ny solosainao, azonao atao ihany koa ny mampiantrano a famerenana tena mora, miaraka amin'ny tombony azo amin'ny fanatonana olona maro miaraka. Azo atao ny manome aingam-panahy avy amin'ny fifaninanana amin'ny fahita lavitra toy ny "Iza no te-ho tonga milionera" O "Ny lova" ary asio olona maro amin'ny ekipa samihafa hiara-miala voly. Noho izany, aza matahotra ny hieritreritra be sy hamorona!
Azo atao ny manohy mamorona ny questionnaire amin'ny taratasy sy penina, fa raha tianao ny zavatra nomerika, Kahoot afaka manampy anao. Kahoot mamela, raha ny marina, ny mamorona fampisehoana fanontaniana safidy maro, izay zarain'ny tsirairay amin'ny alàlan'ny tranokalany ary mitantana ny mpitantana rehetra raha ny momba ny isa sy ny isa no isaina. Ny drafitra maimaim-poana dia ahafahanao mizara fanontaniana iray Kahoot miaraka amin'ny olona 10 miaraka amin'izay, miaraka amina fotoana sy isa manokana.
VAKIO IHANY: Ny lalao trivia tsara indrindra misy fanontaniana (Android sy iPhone)
Ity lalao ity dia mahita ekipa roa mifaninana amin'ny sehatra an-tserasera zaraina feno teny ary ny tanjonao dia ny hamafana ny tenin'ny ekipanao faran'izay haingana. Ny ekipa tsirairay dia manendry a "foreman" izay manana ny adidy manome ny famantarana ny sakaizany hamina teny betsaka araka izay azo atao: ohatra ny teny "andro" dia ho fambara ho an'ny teny roa "fotoana" izany amin'ny teny "hazavana". Mazava ho azy fa arakaraka ny hamaranao ny teny soratanao miaraka amin'ny soritra vitsy kokoa no vao mainka hamafana ny tabilao sy ny haben'ny fandresena.
Lalao tsara ity izay ahafahan'ny olona mitsangana mihetsika ary miasa ao amin'ny ekipa misy olona marobe manodidina ny solosaina finday na webcam koa. Azo atao ny manao ny fihazana harena lava kokoa sy sarotra kokoa na fohy sy mora kokoa amin'ny tanjona hanangonana zavatra manokana, na zavatra mifanaraka amin'ny masontsivana sasany, manerana ny trano. Mba hitazonana ny fifaninanana eo amin'ireo mpilalao samy hafa dia azo atao ny manampy na mampihena ny isa arakaraka ny hafainganana sy ny fahaizan'ny mpandray anjara amin'ny fisafidianana zavatra. Fandraisana an-trano tsara manana lisitr'ireo hevi-dehibe hanombohana anao.
Manerana ny solaitrabe an'ny Focus, hita ao amin'ilay fizarana anjara, azonao atao ny milalao ny kinova virtoaly an'ny Ptionary: mifandimby, ny mpandray anjara tsirairay avy amin'ny lalao dia samy hizara ny takelaka misy azy amin'ny hafa ary hanomboka hisarika azy. Azonao atao ny misafidy sy manamboatra loko isan-karazany, haben'ny borosy ary maro hafa mba hampiavaka ny sary sy zava-misy.
Ilay mpandray anjara voalohany maminavina izay hataony sary dia hahazo ny hevitra!
Saika ny olona rehetra manana ampihimamba: araka ny hitantsika teo aloha momba ny chessAmin'ity tranga ity koa, ny sisa ataonao dia ny manamboatra azy io, mamorona toerana ho an'ny solosaina mba ho traikefa sy lalao iraisana. Mila manana banky roa na maromaro ianao, iray isaky ny ekipa. Focus, iza koa no tsy maintsy miantoka fa tsy misy olona manandrana mametaka ary miasa ireo fifanakalozana lavitra eo amin'ireo mpilalao ireo.
Mazava ho azy fa ny lalao dia tsy maintsy hitranga amin'ny tabilaon'ny ekipa tsirairay avy na amin'ny fivezivezan'ny paiony na amin'ny fananganana trano sy trano fandraisam-bahiny. Marina fa misy litera sasany, toa ny fisehoan-javatra tsy ampoizina mi fahafahana Hatao kopia izy ireo ary misy ampahany amin'ny lalao tsy mandeha mihitsy, fa ny zava-dehibe dia ny miala voly miaraka amin'ny mpiara-miasa ary mandany ny fialantsasatra miaraka amin'ireo olon-tiana na dia avy any "lavitra" aza.
VAKIO IHANY: Lalao birao sy efitrano fandraisam-bahiny an-tserasera: risika, ampihimamba sy ny hafa
Ity lalao ity dia mitaky ny fananan'ny mpilalao rehetra Wikipedia sokafy amin'ny fitaovana rehetra, na solosaina findainy, tablette na telefaona io. Ny mpilalao rehetra dia tsy maintsy manana pejy fanombohana sy fiafarana mitovy - ny olona izay mandeha amin'ny iray mankany amin'ny iray hafa amin'ny fotoana fohy indrindra no mpandresy. Ny fitsipika fototra dia ny ahafahanao mamindra amin'ny alàlan'ny rakipahalalana amin'ny alàlan'ny fanindriana na fanoratana ireo rohy Wikipedia, noho izany ny mpilalao dia mila mieritreritra an-tsaina izay rohy manapa-kevitra harahin'izy ireo.
Amin'ity lalao ity, ny saina dia ny zavatra rehetra ... inona no ilaina mba hiala voly! Ny mpandray anjara tsirairay kosa dia tsy maintsy manandrana mamorona ny hafa ho zavatra iray, toetra amam-panahy, tsotra fotsiny mimandoli. Ny saina ihany no fetra! Azonao atao ihany koa ny mieritreritra ny hanova ity lalao ity ho lasa kinova. horonan-tsary, ka maka tahaka ny lohatenin'ny sarimihetsika sarimihetsika, na dia misy teny maromaro aza. Amin'ity tranga ity, alohan'ny hanombohana maka tahaka ny horonantsary, ilaina ny manondro ny isan'ny teny mandrafitra ny lohateny ary avy eo… mandehana ny fanamby!
Hevero ny hira
Lalao mahafinaritra hafa hatolotra Focus es Hevero ny hira, karazana Sarabanda Online izay hiteraka fahafinaretana sy fifaninanana. Ny tena tsara eto dia ny manararaotra ny fizarana mozika azo ampandehanana amin'ny fipihana eo amin'ny kisary anjara avy eo mandeha any amin'ny fizarana Advanced sy mifantina ny lahatsoratra Hizara audio audio fotsiny. Amin'izay fotoana izay, ny feo avy amin'ny solosaina na iza na iza manana andraikitra amin'ny fisafidianana ilay hira ho vinavina dia hozaraina amin'ny olon-drehetra. Ho ampy, noho izany, ny fanombohana ny hira ary ... andraso ny voalohany hahafahany manome ny valiny marina amin'ny fanambin'ny mega amin'ny fahalalana sy ny fahaiza-miaina mozika.
Raha tianao ny mangina kely kokoa, ny chess lalao mora ariana izy ireo Focus. Azo antoka fa afaka milalao chess amin'ny Internet ianao na amin'ny alàlan'ny endrika hafatra rehetra, fa ny fandaniana fotoana miresaka amin'ny olon-tianao lavitra amin'ny tabilao fanaovana chess dia hahatonga anao hahatsapa ho akaiky kokoa. Mila mahatsiaro fotsiny ianao hamindra ireo sombin-kazo amin'ny zana-kazo roa mba hananana ny fivoaran'ny lalao eo ambany fifehezana. Ary ho an'ireo mazoto indrindra, azo atao ny milalao mandritra ny andro maromaro: avelao fotsiny ny fikirakirana ny solaitrabe miaraka amin'ireo sombin-javatra rehetra. Manome fotoana anao handaminana tetikady mandresy koa izany!
VAKIO IHANY: Chess ary vehivavy maimaimpoana amin'ny Android, iPhone ary amin'ny Internet
Ny fitsangatsanganana - ny fitsangatsangana
Teraka ho fanatanjahan-tena ao Aza Tia Tena ho an'ny mpiasa miasa lavitra, Ny diany efa azon'izay te hanandrana azy maimaim-poana izany.
Mpitantara iray no mitarika ny sisa amin'ny vondrona, mizara ekipa mifaninana, mizara sary mihetsika manome ny fotoana mety safidio ny fiainanao- Mila manapa-kevitra amin'ny vondrona ianao amin'ny alàlan'ny sehatra fandefasan-kafatra eo noho eo izay nofidinao mba hahazoana antoka fa tafavoaka ny alina ny ekipanao ary tsy hahita loza.
milalao Charades Amin'ny kaonferansa horonantsary dia mila efitrano fandraisam-bahiny ianao hanaovana jiro sy hazavana marobe mba tsy ho grainy loatra ilay horonan-tsary. Ny tanjon'ny lalao dia ny mangataka amin'ilay mpanakanto mba hanana hevitra ary hametraka izany mba hahafantaran'ny ekipany sisa. Ireo izay mandray anjara amin'ilay antso an-tsary dia afaka mijery, manara-maso fotoana, ary manome antoka fa tsy hisy ny fitaka. Raha manana karatra maromaro ny mpandray anjara rehetra Charades ao an-trano dia mbola tsara kokoa.
VAKIO IHANY: Play bingo, scoreboard ary fitrandrahana isa
Tao amin'ny lahatsoratra hafa dia nahita koa isika:
Lalao 10 ho an'ny roa hilalao amin'ny PC na amin'ny Internet (HTML5)
Lalao 20 maimaim-poana hilalao lalao an-tserasera sy hilalao amin'ny namana